Dowlada Norway oo 54.3 milyan oo doolar ku bixinaysa dib u dhiska Soomaaliya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDowlada Norway oo 54.3 milyan oo doolar ku bixinaysa dib u dhiska Soomaaliya
Dowlada Norway oo 54.3 milyan oo doolar ku bixinaysa dib u dhiska Soomaaliya
Hiiraan Xog, Xukuumadda Norway oo shaaca ka qaaday in lacag dhan 54.3 milyan oo dollar ay ku bixinayso dib u dhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya, waxayna sheegtay in dhaqaalahan ay Soomaaliya u soo marinayso Shirkado kala duwan oo hoos taga Bangiga Aduunka.
Waxayna intaa raacisay in dhaqaalahan ay ugu tala gashay inay Soomaaliya uga hortagto xad-gudubyada iyo dhibaatooyinka kale ee xagga Amniga Soomaaliya la soo dersa.
Wasiiru dowlaha horumarinta dalkaasi Norway u qaabilsanNikolai Astrup ayaa cadeeyay in talaabadan ay dowladiisu ku saacidayso Soomaaliya ay timid kadib markii ay Dowladiisu qiimaysay isla maarkaana aragtay horumarka iyo dadaalada ay wado Dowladda Soomaaliya kuna ku wajahan danaha muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Wuxuu kaloo intaa raaciyay in arrintan ay tusaale u tahay sida ay Dowladda Norway ugu kalsoon tahay Hay’adaha Dowladda Soomaaliya.
Dhanka kale wuxuu cadeeyay Nikolai Astrup in kaalmadan ay Dowlasiisa u fidinayso Soomaaliya ay sii saacidayso horumarka, degenaashaha iyo Amaanka Soomaaliya oo sii wanaag-sanaanaya.
AKHRISO:- Maamulka dekedda Muqdisho oo sheegay in ay howlbilaabayso shirkadda MAERSK LINE
AKHRISO:- Guddiga doorashada maamulka Puntland oo soo saaray shuruudaha musharaxiinta Madaxweynaha iyo Ku Xigeenkiisa